मानिसहरु किन दुःखी हुन्छन् ?, जान्नुहोस् | KTM Khabar
मानिसहरु किन दुःखी हुन्छन् ?, जान्नुहोस्
२०७२ फागुन २ गते ००:३८ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ - एकजना मानिस ज्यादै उदास र निराश भएर बसिरहेको थियो । मेरो विचारमा त्यो व्यक्ति यति धेरै रोइसकेको थियो,उसको वरिपरि के छ भनेर सम्म उसलाई ख्याल थिएन । रोकिई–रोकिई उसका आँखामा आँसु बहन लागेको थियो । सामुन्ने उभिएको एउटा दार्शनिकले निकै अगाडी देखि उसलाई हेरिरहेको थियो । ती दार्शनिक त्यस व्यक्ति नजिकै गई निकै प्रेम पुर्वक सोध्न थाले–“तिमिलाई के भएको छ ?
“म धेरै दुःखी छु” उसले भन्यो ।
“किन ?दार्शनिकको प्रश्न थियो
“मैले घर धनीको भाडा पनि तिरेको छैन । आज साँझ सम्म नतिरेमा उसले मेरा सारा सामानहरु एठाएर बाहिर फ्याँकिदिन्छ र मलाई पिट्छ पनि । त्यो गुण्डा टाइपको मानिस छ ।”
उसले लामो सास फेर्दै भन्यो । सबै ठाउँमा कोशिश गरिसके । साथीभाइ,नातेदार कसैले पनि सहयता गरेनन् । कुनै त्यस्तो सामान पनि मसँग छैन जसलाई बन्धकी वा बेचेर पैसा ल्याउन सकुँ ।”
“आखिर गर्छौ के काम ?”
“एउटा फर्ममा काम गर्छु । आज यहि चक्करले गर्दा काममा पनि गइँन । फर्मको मालिक बाहिर गएको छ । एक हप्ता पछि मात्र फर्कन्छ । मेनेजर भन्छ काम पुरा सकिदेऊ अनि त्यसपछि पैसा लैजाऊ । काम पुरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले पैसा दिइरहेको छैन । मालिक भएको भए त अवश्य पनि पैसा पाइन्थ्यो ।
“काम पुरा गरेको छैन ?”
“हो”उसले भन्यो ।
“किन ?” दार्शनिकले सोध्यो ।
“केहि दुःखका कारण नै रोकिन गएको छ ।”
“काम पुरा गरेको भए आज यो समस्य आइपथ्र्यो त ?”
ऊ शिर निहुराएर बस्यो । दार्शनिकले भने –“तिमिले आफुले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ । काम पुरा गरिदिएको भए आज यो हालत हुन्थ्यो ?”
ऊ चुपचाप बसिरह्यो ।
दार्शनिकको यो भनाई एकदम ठिक थियो । कुनै पनि दुःख वा चिन्ता,जसले हाम्रो सुख हरण गरेको हुन्छ त्यसको जन्म हाम्रै क्रियाकलापबाट भएको हुन्छ । हामी स्वयं नै त्यसको जिम्मेवार हौ । दार्शनिक कार्लाइलको भनाई छ– दुःख हाम्रै कार्यको फल हो । यदि तपाई स्वयंले आफ्नो नराम्रो हालतलाई वा दुःखको कारणलाई इमान्दारीपुर्वक सोच्ने हो भने त्यसमा तपाई आफ्नै दोष भएकोथाहा पाउनु हुनेछ । अरु कोहि पनि तपाईको दुर्दशाको रत्तिभर पनि जिम्मेवार हुँर्दैनन् । तपाईले चिन्तन गर्ना साथ तपाईलाई थाहा हुन्छ कि अमुक तपाईको गल्ती वा असावधानिका कारणबाट त्यस्तो भएको हो । यदि त्यो दोष तपाईको तर्फबाट उत्पन्न नभएको भए सायद निश्चित थियो कि तपाईले त्यो किसिमको दुःख उठाउँनु पर्दैनथ्यो । यो तपाई कै कर्मको फल हो ।
हरेक मानिस सुख पाउन चाहन्छ । को कस्तो व्यक्ति छ जो सुख पाउनका लागि लालयित हुँदैन ? हरेक मानिस त्यसका लागि त सधैं इच्छुक र प्रयत्नशील रहिरहेको हुन्छ । सुख के सजिलै पाईन्छ ? सुख पाउन त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि एउटा साधना गर्नु जरूरी हुन्छ । नियमको पालना गर्नु जरूरी हुन्छ । जब सम्म तपाई त्यस्तो गर्नुहुन्न, तपाई कसरी सुख पाउन सक्नु हुन्छ ? माथि उल्लेखित दुःखी व्यक्तिले त्यति धेरै दुःखी नबनी आफ्नो काम पुरा गरेको भए हुन्थ्यो । मालिक नभए पनि उसलाई पैसा उपलब्ध हुन सक्थ्यो र त्यति धेरै दुःख पाउनु पर्दैनथ्यो ।
दुःख–सुख के हो ? इब्ने बतुताको भनाई यो छ की मनको भावनाको नाम नै सुख हो र मनको भावनाको नाम नै दुःख हो । शेक्सपियरले पनि यसलाई मनोदशाको नाम दिएका छन् । जस्तो तपाईको भावना हुन्छ त्यस्तै नै तपाइलाई अनुभव हुनेछ । हेर्दै जाने हो भने वास्तवमै संसारका कुनै पनि मानिस सुखी छैनन् ।सबैलाई कुनै न कुनै कुराको दुःख छ अभाव छ । सबै आ–आफ्ना भागदौडमा लागिरहेका छन् ।सुख नामको वस्तुका लागि मानौं सबैजना तर्सिरहेका छन् ।यसलाई खोजेर पनि कतै पाउन सकिरहेका छैनन् । सुखले मानिसलाई ठुलो शान्ति र शक्ति प्रदान गर्दछ । सुखी मानिस मिठो निन्द्रामा सुत्छ र उसको स्वास्थ्य पनि सधै राम्रो रहिरहन्छ ।
आखिर यो सुख भनेको के हो ?
सुखका लागि हरेक मानिस दुःखी भएका छन् । दुःख सबैलाई केहि न केहि कुराको पक्कै छ । वास्तविकता चाँहि यो छ कि मनले मानेमा सुख छ,अनि त्यहि मनले मानेमा दुःख छ । मानिसको लोभ र लालचले नै उनीहरूलाई दुःखको भावनामा लैजान्छ । संसारमा रहेका कुनै पनि चल वा अचल जीवित वा मृत वस्तुहरू प्रति एउटा सिद्धान्त हुन्छ,ती सबैमा केहि न केहि अवगुण वा दोष अवश्य पनि लुकेको हुन्छ । सबै कुराले पुर्ण र सबैभन्दा सुन्दर यस संसारमा केहि पनि वस्तु छैन । सबैकुरा कुनै पनि वस्तु मा कदापी हुन सक्दैन ।
यो त्यहि सबै कुरा नहुनुले नै मानिसलाई दुःखी बनाउँछ । यसै कारणले गर्दा,कुनै पनि व्यक्ति केहि पाएर खुसी भएको हुँदैन । यदि एकपटक उसले ीवर्ग नै पायो भने पनि केहि समय पछि त्यसमा केहि न केहि दोष निकाल्न थालिहाल्दछ र उसले स्वर्गको सुख पाईसकेपछि पनि फेरि ऊ दुःखी हुन थाल्दछ । यो सारा मानिसको स्वभाव हो । यसै कारणले गर्दा सन्तोष लिनुलाई महत्वपुर्णरूपमा लिइएको छ र सन्तोषलाई नै सुखको जन्मदाता मानिएको छ ।
सुख सन्तोषमा नै छ । जब सम्म तपाई सँग जे छ त्यसमा नै तपाई सन्तोषको अनुभव गर्नुहुन्न,तब सम्म तपाईलाई सुख प्राप्त हुन सक्र्दैन । त्यसैले यदि तपाई सुख चाहनुहुन्छ भने तपाईमा सन्तोषको भावना हुनु आवश्यक छ । जब सम्म यो भावना हुदैन तब सम्म सुख पाउन सक्नु हुन्न । जब तपाईको मनमा सन्तोषको भावना उत्पन्न हुन्छ , तब तपाई आफै स्वयं सुखको अनुभव गर्न थाल्नु हुन्छ ।
माइकल ब्राउनको भनाई कति सहि छ भने उनको भनाईमा जुन कुरा तपाई सँग छ त्यसै प्रति सन्तुष्ट हुँदै अगाडी बढ्ने कामना राख्नुपर्दछ । यो वाक्य वा भनाई अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेको छ । यसलाई बुझेर नै तपाई आफ्नो सुखको महसुस गर्न र सफल हुन सक्नुहुन्छ । जो जे छ त्यसैमा सन्तोष गर्दै भविष्यको कामना गर्नु,आफु–आफैमा यसले ठुलो अर्थ राख्दछ । पुर्णरूपबाट जुन कुरा छ त्यस प्रति सन्तोष लिनु भनेको आफ्नो प्रगतिको लागि अगाडिको ढोका बन्द गर्नु हो ।
आफ्नो मार्गलाई अवरूद्ध पार्नु हो । जो जे छ त्यसैमा सन्तोष गरी अगाडी बढ्ने कामना राख्नुनै लक्ष्य हो र जसले यस्तो गर्दछ उसले नै सुख पनि पाउँछ । उदाहरणका लागि जेनलाई लिन सकिन्छ । उसको रेडीमेड गार्मेन्टको पसल छ । यो सानो पसल बाट उसको परिवारको सारा घरखर्च मजासँग चलेको छ । त्यसबाट ऊ सन्तोष पनि लिन्छ अनि उसले सुखको पनि अनुभव गरिरहेको छ । बदलामा उसले त्यस पसललाई अगाडि बढाउने कोशिश पनि गरिरहेको छ ।
उसले सन्तोष लिदै गार्मेन्ट उद्योग खोल्न समेत प्रयास गरिरहेको छ,र यस दिशामा उसले आफ्नो कदम अगाडि बढाएको छ । त्यसैले यस्तो गर्नु सर्वथा उचित पनि हो । सुखी रहेर नै ऊ प्रगती गर्दछ ।
वर्तमान प्रति सन्तोष लिएर भविष्यका लागि जो प्रयत्नशील रहिरहन्छ र शरीरको दुःखलाई भुल्दछ उसले नै वास्तवमा सुख पाउँछ । त्यसैले जो जे छ तपाई सामु त्यसैप्रति अवश्य सन्तोष गर्नुहोस् । जो जे छ तपाईसँग ठिक छ,ईश्वरले तपाईलाई धेरै नै दिएका हुन्,त्यसैमा ठुलो सख छ । अरू के चाहियो ? यसको साथ साथै भविष्यका लागि तपाई प्रयत्नशील भइरहनुहोस् । यहि नै सुख हो । यस प्रकार बाट तपाई आफुलाई सुखको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसको विपरीत यदि तपाई आफुसँग जो जे छ त्यसैमा सन्तोष प्रकट नगरी रूनु हुन्छ,चिच्याउनु हुन्छ,झर्कोफर्को गर्नुहुन्छ भने तपाईले अलिकति पनि सुद पाउन सक्नुहुन्न र कामनाको वासनाले गर्दा तर्पाले आफ्नो वर्तमानलाई समेत समाप्त पारिदिनुहुन्छ । सुखबाट हात धोएर बस्नुपर्छ । आफ्नो सारा चैन उडाउन हुन्छ ।
अतएवं हामीले जे जति छ ,जे छ त्यसैमा सन्तोष मानी सुख लिनुपर्छ । आफ्नो चर्केको घर भए पनि केहि त छ मसँग भन्ने ठानी सन्तोष लिनुहोस् । यस्ता कति धेरै मानिसहरू जसका चर्केका समेत कुनै घर छैनन् । तिनीहरू मध्ये पनि त्यो नै बढी भाग्यमानी व्यक्ति हो,जो सन्तान एवं सुखको निन्द्रा लिएर निदाउँछ अनि चर्केको घरलाई पनि राजमहल बनाउनका लागि अवश्य पनि प्रयत्नशील रहिरहेको हुन्छ । त्यहि नै तपाईको वास्तविक प्रगती हो । यस प्रकार तपाई सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो टुटेको चर्केको घरतिर हेरी रूनु,झर्कोफर्को गर्नु,असन्तोष प्रकट गर्नु तपाईका लागि हानिकारक हुन्छ ।
संसारमा यस्तो कुनै पनि समस्या हुँदैन,जसको समाधानको विकल्प छैन । सबैको समाधानको बाटो पक्कै हुन्छ । तपाईलाई जुन संकट वा दुःख आइलागेको छ त्यसको पनि केहि न केहिबाट अवश्य समाधाान हुन्छ । व्यर्थमा आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिएर तपाई किन दुःखी हुने । हुन्छ –त्यहि कुरा आखिर जे हुनुछ । त्यसैले त्यसलाई साहसका साथ मुकाविला गर्नु पर्छ । भय देखि त्यतिबेला मात्र तपाई डर लिइराख्नुहोस्,जबसम्म तपाई सामुन्ने आइपुगेको हुँदैन । जब तपाई सामुन्ने आइपुग्छ अनि तपाई त्यसलाई साहसका साथ मुकाविला गर्नुहोस् । तब तपाईको जित निश्चित छ ।
साँचो कुरा त यो हो कि हामी मध्ये अधिकांश मानिसहरु आफ्नो सुख आफ्ना व्यर्थको चिन्ता र दुःख का कारण खोजिरहेका हुन्छौ । अधिकतम् यस प्रकारका दुःखहरू जसको न कुनै शिर हुन्छ न कुनै खुट्टा,केबल बेमतलवका कुराहरू मात्र हुन्छन् । गम्भिरतापूर्वक तपाई आफूलाई नियाल्नुहोस् । जो जे छ त्यसैमा सन्तोष मान्नु जरूरी हुन्छ । आफ्नो जे छ त्यसैमा तपाई सुखको अनुभव गर्नुहोस् । आफ्नो सुख्खा रोटी मा नै सन्तोष मान्नुहोस् । अरूका चील्ला रोटी देखेर मन चञ्चल पार्नु राम्रो होईन ।
आराम सँग सुत्नुहोस्–जुन व्यक्ति सुखको निन्द्रामा निदाउँछ उसको स्वास्थ्य पनि सधै राम्रो रहिरहन्छ । उसको समेर पनि थाहा पाउन सकिदैन । ऊ आफ्नो वास्तविक उमेर भन्दा पाि कान्छो देखिन्छ साथै ऊ दिर्घायु पनि हुन्छ । उसको चेहेरा पनि आकर्षक देखिन्छ । त्यसको विपरित जुन व्यक्ति हुन्छ ऊ खास उमेर भन्दा पनि बुढो देखिन्छ । आयु पनि कम हुन्छ । प्रायःविरामी भइरहन्छ । सुन्दर अनुहार पनि बिग्रिएर नराम्रो कुरूप देखिन्छ । उसको व्यक्तित्व पनि अनाकर्षक देखिन्छ ।
तपाई के चाहनुहुन्छ ? सुख, त्यसो हो भने तपाईले सन्तोष लिनु परम आवश्यक छ । आफ्नो व्यक्तित्व तपाई आफै आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईले यी नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । कति नै धेरै तपाईलाई दुःख आइपरोस्,तपाई आरामसँग निदाउनुहोस् । एकदम बेफिक्रीसँग तपाईको मन खुसी भइराख्नेछ । तपाईको स्वास्थ्य पनि ठीक भइराख्दछ । याद राख्नुहोस्, दुःख त चिन्ता गर्दैमा,छटपटाउँदैमा,झोक्किदैमा, चिच्याउँदैमा,कराउँदैमा टाढा हुदैन बरू त्यसको बदला समाधान खोज्नुपर्छ ।
ढुङ्गा माथिबाट हात थिचिएको छ भने त्यसलाई विस्तारै –विस्तारै निकाल्नुपर्छ । एकदम आत्तिएर हत्तपत्त निकाल्न खोजियो भने हात काटेर त्यहिँ रहन पनि सक्छ या तपाईलाई चोट लाग्दछ । सुस्तरी निकाल्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यहि कुरा तपाईको दुःखका बारेमा पनि लागु हुन्छ ।के तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ,दुःख किन उत्पन्न हुन्छ ? तपाईको असन्तोषको कारण ।
दुःखको जन्म दिने वाला वस्तुअसन्तोष नै हो ।जब हामी कुनै कुरा प्रति असन्तोष गर्छौ अनि दुःखको रूप बनिहाल्छ । सन्तोष नभएपछि दुःख पैदा भइहाल्छ । त्यसैले वास्तवमै सुख चाहने हो भने सन्तोष लिनु पर्दछ । जस्तो छ जे छ त्यसैमा सन्तोष मानौं । आरामसँग सुत्नुस् । छट्पटाउँदैमा हायहाय भन्दैमा केहि हुँदैन । आफ्नो मनलाई प्रशन्न राख्नुहोस् । मन भि शुल आउँन नदिउँ । मनमा नराम्रो शुल पैदा हुनु नै दुःको कारण हो । जति नै जेसुकै भए तापनि हाँस्न,मुस्कुराउन,आरामसँग सुत्न नछोडौ । केहि केहि मानिसहरु आत्तिन्छन् । हाय ! यस्तो भयो । अब के होला ? कसरी होला ? भन्दै दुःखले चारैतिर घेरेको पाउँछन् । उनीहरु खानपिन गर्न पनि बिर्सन्छन् । अनुआर रङ्गहीन हुनथाल्छ । परिवारलाई समेत सुखचैन दिदैनन् ।
जब तपाई अभावको अनुभव नै गर्नुहुन्न आफुलाई सन्तोषमा राख्नुहुन्छ भने दुःख हुँदैहुदैन । बहालमा बस्ने मान्छे भएर आफ्नो घर नहुनुको दुःख मनाऊ गर्नु सबभन्दा बढी मुर्खता हो । आफुमा सन्तोष लिनुपर्छ । दुःख मनाऊ नगरी कोशिश गरी आफ्नो घर बन्न सके त…… अनि त मज्जा हुन्थ्यो ।
एउटा कुरा तपाईले आफ्नो ध्यानमा राख्नुहोस्, जुनकुरो तपाईका लागि दुःखको कारण हुन सक्छ , त्यहि कुरो अरू कसैका लागि सुखको कारण पनि बन्न सक्छ । जुन तपाईका लागि सुख हुन्छ अरुका लागि दुःख पनि हुन सक्छ । त्यसैले तपाईका भावनाहरू मात्र व्यर्थ हुन जान्छन् । आफ्नो मनका भावनाहरुलाई आफ्नै अधिकारमा राख्नुहोस् । तपाईलाई दुःखको अनुभव हुने छैन । स्वयंप्रति नियन्त्रण राख्नुहोस् ।
एउटा व्यक्ति रेलबाट यात्रा गरिरहेको थियो । उसको आँखामा सुनको महङ्गो बहुमुल्य फ्रेमवाला चश्मा थियो । अचानक रेल एउटा नदिको पुलमुनिबाट गइरहेको उसले चुकुल खोलेर हेर्दा देख्यो । त्यहीँनेर उसको चश्मा पुलमा ठोक्किएर तल नदीमा खस्न पुग्यो । ऊ चकित प¥यो । एक–दुई यात्रीहरू चिच्याउँदै कराउन थाले–“जञ्जीर खिच ।”
केहि बेर सम्म त त्यो युवकले धैर्य ग¥यो । अनि फेरी भन्न थाल्यो “के भयो ? चश्मा त तल नदीमा पर्न गयो ।” त्यो युवकले धैर्य लिएर बस्यो । उसले अलिकति पनि दुःख मनाउ गरेन । के यस्तो घटनामा दुःख मान्दैमा उसको चश्मा पाउन सकिन्थ्यो त ? कदापि सकिदैनथ्यो । यस घटनामा उसले आफैलाई दुःखी बनाएर अझ बढी नोक्सान पार्न सक्थ्यो । तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट हामी आफै बुझ्न सक्छौ कि हामी आफै दुःखी भएर आफै अहित गरिरहेका हुन्छौ । सधै भरी नै सुखको कल्पना गरिरहनु पर्छ । हरेक कुरामा सुख ठान्नु पर्छ ।
दुःख के हो ? दुःख भन्ने कुन चराको नाम हो थाहै छैन भन्दै तपाईले यसलाई बिर्सनुपर्छ । हरेक समय हरेक परिस्थिति तपाईले आफुलाई प्रसन्न राख्नुहोस् अनि तपाई यस्तो खाले कुनै कार्य गर्नुहोस् कि दुःखको कुनै अवसर नै नआओस् । कर्लाइलको भनाई के छ भने दुःखको कारण नै हामी स्वयं आफै हौ । हाम्रै कार्यको फल हो दुःख । त्यो अन्यत्र बाहिरबाट आएको हुँदैन । त्यसैले आफ्नै कर्मलाई हेर्दै हामी सबै किन रून्छौ ? त्यसको कारण हेरौं र त्यसलाई समाधान गरौ ।
जसरी सकिन्छ त्यसरी नै त्यस स्थितिको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौं । सधै प्रसन्न र सुखको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरुले नै आफ्नो जीवनमा प्रगती गर्न सक्छन् । उनीहरुको शरीर स्वस्थ रहेको हुन्छ । उनीहरु दिर्घायु पनि हुन्छन् । उनीहरुको जीवन सफल हुन्छ । हरेक समय एउटा न एउटा दुःख अलापेर बस्ने मानिसहरू जीवनभरी रूँदारूँदा आफुलाई बर्बाद पार्दछन् ।
दुःखमा पनि जो मानिस मुस्कुराउँछ उसको दुःख टाढा भाग्दछ । अरस्तुसँग एउटा व्यक्तिले सोधे–“म धेरै दुःखी छु । मेरो दुःख कसरी टाढा भाग्दछ ?” तिमि मुस्कुराई राख,दुःख त्यहि समयमै भागिहाल्छ ।” त्यो व्यक्तिले भनेको मान्यो । मुस्कुरायो अनि उसको मन खुसी भयो । यसप्रकार जो मानिस दुःखमा पनि मुस्कुराउँछ उसले जीवनमा सुख पाउँछ । तपाई सधैभरी सुख पाउन सम्नु हुन्छ । यो तपाई कै हातमा छ । दुःख–सुख हरेक मानिसआफैले पैदा गर्दछन् । त्यसै कारण यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने सुख पाउन सक्नु हुन्छ ।
साभार : प्रोत्साह राष्ट्रिय मासिकबाट